🥇 Kaonty amin'ny fampiasana tavy
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 673
Lahatsary momba ny kaonty amin'ny fampiasana tavy
Manafatra kaonty amin'ny fampiasana tavy
Textile Accounting dia famaritana kilasy iraisam-pirenena izay manampy tavy amin'ny fiteny vahiny rehetra. Ny asa ao amin'ny atelier dia mifandray mivantana amin'ny famatsiana sy ny fampiasana kojakoja sy sela. Ao amin'ny indostria, ny fividianana azy ireo dia mila fikajiana fampiharana raha ilaina. Ny fitantanana fanaraha-maso, mandray ny kaonty ny karazana fittings, dia mihevitra ny maha-zava-dehibe ny fampiasana serivisy fanohanana ny rafitra. Ny firafitry ny kaonty nohatsaraina dia manome fifehezana lehibe ny fampiasana tisu. Ny fitantanana amin'ny fanomezana serivisy dia manambatra ny fampiasana ny sela amin'ny famokarana, ny fandaniana amin'ny famokarana vokatra, ny fandaminana ny andro fiasana mahomby. Niorina, ny kaonty momba ny fampiasana ny sela dia azo hamarinina amin'ny alàlan'ny rindrambaiko azo takarina, azo takarina, tsy misy pitsiny izay mamela ny asa sy ny serivisy avo lenta amin'ny ambaratonga takiana. Isaky ny baiko tsirairay dia misy ny kajy voajanahary azo ampiasaina; mampiseho izay kojakoja ilaina amin'ny habe ilaina amin'ny fanjairana. Ny USU dia manana ny tanjaka ilaina amin'ny fitantanana ny tavy sy ny fampiasana zavatra azo ampiasaina. Ao amin'ny indostrian'ny akanjo, ny kaonty amin'ny fampiasana angon-drakitra, mampitaha ny fampiasana azy ireo, dia mamonjy ny fiverenan'ny fitaovana izahay. Ny fifehezana ny vidiny sy ny fampiasana ny tavy dia zava-dehibe indrindra amin'ny famokarana. Ny programa dia mampiditra serivisy amin'ny filaharana takiana, mifehy ny fanatanterahana azy ireo izay mitondra ny orinasanao any amin'ny ambaratonga manaraka. Ny kaontin'ny trano fitehirizam-bokin'ny sela dia manamboatra ny fanekena sy ny fanjifana lamba araka ny antontan-taratasy raikitra.
Ny lisitry ny vokatra fitehirizam-bokatra manontolo dia tafiditra ao amin'ny nomenclature, mamorona antontan-taratasy mazava momba ny varotra vokatra rehetra. Misy ny fametrahana ny fidiran'ny entana ao anatin'izany ny toetra, habe, habe, sary, isa tsirairay. Amin'ny departemanta atelier rehetra, azonao atao ny mijery ny tatitra momba ny trano fitehirizam-bokatra, taolam-paty, kojakoja ary vokatra vita. Azonao atao ny mamorona ny fisian'ny entana amin'izao fotoana izao, ary koa ny fampiasana azy ato ho ato. Ny tatitra misaraka dia namboarina ho an'ny sela ampiasaina. Miorina amin'ny tombana amin'ny famokarana, misy ny tatitra momba ny kaomandy. Ny tatitra dia misy: laharana filaharana, anaran'ny vokatra, loko, habe, vidiny ary habe. Ny kaonty amin'ny fampiasana ny sela dia fitantarana ny fitaovana ampiasaina sy ny fananganana karazana tatitra isan-karazany. Miaraka amin'ny fampiharana sy fampidirana, ny rafitra fanaraha-maso dia nanjary mora kokoa sy mora kokoa ny miasa. Marihina fa ny programa dia manisa ny zava-drehetra ary mandinika ireo lesoka amin'ny famokarana. Ny fidirana amin'ny fampiharana dia manakana ny mpiasa tsy hamafa na hanitsy ireo antontan-taratasy manan-danja samirery. Ny kaonty ao amin'ny atelier dia tanterahana amin'ny alàlan'ny zaitra sy ny kofehy ampiasaina. Mba hamita ny orinasa dia mahazo karama ny mpiasa tsirairay, izay isaina amin'ny alàlan'ny rafitra. Mba hanomanana ny vokatra dia esorina amin'ny trano fitehirizana ilay fitaovana. Amin'ny dingan'ny asa dia tsy mila miditra tanana ny filaharan'ny hetsika ianao, ary ny sela ilaina, ny rafitra mihitsy no mandamina ny zava-drehetra. Amin'ny tranga sasany dia azonao atao ny manamboatra fanitsiana lamba na fanamboarana. Ny baikon'ny mpanjifa mandritra ny famokarana dia voasoratra ao amin'ny atelier araky ny antontan-taratasy, rehefa vonona dia alefa any amin'ny trano fitehirizana vokatra vita. Ny mpiasa dia tarihin'ny ambin'ny entana na ao amin'ny trano fitehirizana na ao amin'ny atelier. Ho an'ny fampiharana tsirairay dia isaina ny vidin'ny serivisy. Ireo asa rehetra ireo dia mandeha ho azy ao anaty tahiry tokana.
Ny fampiasana tisu dia voarakitra ho azy miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso;
Fananganana karaman'ny mpiasa, raha jerena ny asa vita;
Ny famoahana famokarana fittings dia voarakitra miaraka amin'ny angon-drakitra tahiry, toy ny habetsahana, daty, anarana, mpamatsy;
Rehefa manampy fitaovana amin'ny nomenclature dia manome famaritana feno izahay, amin'izay dia mitady fikarohana haingana ny vokatra amin'ny alàlan'ny masontsivana rehetra;
Fanamarihana momba ny fivarotana serivisy, faktiora, fanamarinana, fifanarahana dia novokarin'ny rafitra mandeha ho azy, araka ny angon-drakitra feno ho an'ny fenitra rehetra;
Ao amin'ny tatitra momba ny vokatra, dia mampiseho raha toa ka nitahiry na fittings tsy nety ireo entana ireo, ireo vokatra ireo dia azo alefa automatique amin'ny alàlan'ny fampiharana, na fanesorana;
Ny Rindrambaiko USU dia fananganana tatitra momba ny fifandanjan'ny entana;
Fampandrenesana ara-potoana an'ireo mpiasa momba ny kojakoja famaranana, raha tsy eo an-toerana ny mpiasa dia tonga amin'ny alàlan'ny SMS ny fampandrenesana - hafatra;
USU dia manana fampandrenesana maoderina ho an'ny mpanjifa, toy ny SMS - fampandrenesana, fandefasana feo, fandefasana mailaka;
Ny famakafakana ireo fittings dia natambatra tamin'ny singa izay be mpitia kokoa sy lafo indrindra, izay tsy dia tsara loatra, ary inona no kely tsy lafo;
USU dia fitomboana voaomana, maharitra ho amin'ny fahombiazana, ary fanaraha-maso mahomby amin'ny fitantanana;
Ny fisian'ny fametahana fihenam-bidy amin'ny fampiharana ny serivisy, dia mandeha ho azy ny antontan-taratasy efa voaomana amin'ny famerenana amin'ny laoniny marina;
Mizara ny mpiasa tsara indrindra arakaraka ny habetsahana sy ny kalitaon'ny asa vita;
Mampahafantatra ny hetsika isan'andro ny fampiharana, miantoka ny famokarana avo lenta;
Ny tahiry dia mitazona ny mpanjifa mandritra ny vanim-potoana fisian'ny atelier;
Ny rafitra dia manome ny asa, ny famoronana, ny fitehirizana, ny fanodinana, ny fampiasana ny fampahalalana ilaina ho an'ny taloha sy ny ankehitriny;
Manao sary sy manao pirinty ny karazana tatitra rehetra, amin'ny endrika kisary, sary;
Ny maodelin'ny mpiasa dia misy ny fampahalalana rehetra, ny lohateny, ny angon-drakitra manokana, ary ny datin'ny fanekena ny toerana;
Ny sehatry ny varotra dia mitahiry ny kaonty rehetra momba ny varotra serivisy taloha sy ankehitriny;
Ny lisitra tsirairay notontosaina dia voarakitra amin'ny endrika latabatra, miaraka amin'ny anarana sy habe;
Ny USU dia misy asa maro hafa ampiasaina amin'ny maodelin'ny fitantanana kalitao sy ny fampandrosoana ny famokarana.